Disneyland Resort သည် အံ့မခန်းသောနွေရာသီပျော်စရာ | သတင်းအမြန်
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » သတင်းအမြန် » Disneyland Resort သည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော နွေရာသီ ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးသည်။
သတင်းအမြန် • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
Disneyland Resort သည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော နွေရာသီ ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးသည်။
မေလ 26, 2022
ယင်း၏ 30 ကိုဂုဏ်ပြုသောth နှစ်ပတ်လည်နေ့၊ 'Fantasmic!' မေလ 28 ရက်နေ့မှစ၍ Disneyland Park တွင် ဆွဲဆောင်မှုများ ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မေလ 28 ရက်နေ့တွင်လည်း - Disneyland ရှိ Fantasyland ပြဇာတ်ရုံတွင် 'Tale of the Lion King' ၏ဇာတ်ကြောင်းအသစ်
'The Soul of Jazz: An American Adventure' ဖျော်ဖြေပွဲ အပါအဝင် Black Music Month ကို မီးမောင်းထိုးပြသည့် အတွေ့အကြုံများကို ဂုဏ်ပြုပါ
ဤနွေရာသီတွင် Disneyland Resort သည် မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများအတွက် ထာဝရအမှတ်တရများဖန်တီးရန်၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ခမ်းနားသောထမင်းစားခန်းတွင် အတူတကွ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ မေလ 28 ရက်နေ့တွင် Disneyland Park သည် "Fantasmic!" Rivers of America သို့ Fantasyland ပြဇာတ်ရုံတွင် "ခြင်္သေ့ဘုရင်ပုံပြင်" ၏ဇာတ်ကြောင်းအသစ်ကိုပြသပါ။
ဧည့်သည်များသည် ဇွန်လတွင် Black Music လအတွင်း လူမည်းယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမွေအနှစ်များကို ဂုဏ်ပြုသည့် ဖျော်ဖြေပွဲအသစ်များအပါအဝင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော နွေရာသီကို အမှတ်ရစေမည့် လက်ရှိကျင်းပနေသော အခမ်းအနားများနှင့် အချိန်အကန့်အသတ်အတွေ့အကြုံများကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ထူးထူးခြားခြား ဖျော်ဖြေရေးနှင့် မှတ်တိုင်နှစ်ပတ်လည်များ
ယင်း၏ 30 ကိုဂုဏ်ပြုသောth နှစ်ပတ်လည်နေ့, “စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာ!” - Disney ၏ အရှည်ကြာဆုံး ညအချိန် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့် ဂိမ်းသည် မေလ 28 ရက်နေ့မှ စတင်ကာ Disneyland တွင် တစ်ဖန် ပြန်လည် လောင်ကျွမ်းသွားပါမည်။ ဤချစ်လှစွာသော ရှိုးတွင်၊ Mickey Mouse သည် သူသည် Sorcerer's Apprentice အဖြစ် အိပ်မက်မက်ပြီး အရပ် 45 ပေရှိသော မီးရှူးမီးပန်း Maleficent အပါအဝင် လူဆိုးများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်၊ နဂါး။ “Fantasmic!” ၏ မှော်ဆန်မှု၏ ဗဟိုချက် ပေ 60 အနံ ပေ 30 အနံတစ်ခုစီသည် မြူမှုန်စခရင်သုံးလုံးဖြစ်ပြီး၊ ချစ်ရသော Disney ဇာတ်လမ်းများမှ အမေရိကမြစ်များပေါ်တွင် အသက်ဝင်စေမည့် အခိုက်အတန့်များကို ယူဆောင်လာပေးသော ပေ XNUMX အနံ။
မေလ ၂၈ ရက်မှာလည်း ရုံတင်ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "ခြင်္သေ့ဘုရင်ပုံပြင်" မူရင်းတေးဂီတအစီအစဉ်များနှင့် ကကွက်အသစ်များဖြင့် Disneyland Park တွင် ၎င်း၏ Fantasyland ပြဇာတ်ရုံကို ပွဲဦးထွက်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် ဧည့်သည်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည့် The Storytellers of the Pride Lands ဟုလူသိများသော နယ်လှည့်အဖွဲ့မှ Simba၊ Nala၊ Mufasa၊ Scar၊ Timon နှင့် Pumbaa တို့၏ ဇာတ်လမ်းကို တိုက်ရိုက် ဂီတနှင့် အကများဖြင့် ပြန်လည်ဖော်ပြသည့် ရှိုးပွဲ ဤခေတ်မမီသော ဇာတ်လမ်း၏ ယဉ်ကျေးမှု အရင်းအမြစ်များဖြင့်
ကန့်သတ်ထားသောအချိန်တစ်ခုအတွက် ဧည့်သည်များသည် ညအချိန်မှော်ပညာ၌ မွေ့လျော်နိုင်ပါသည်။ "ပင်မလမ်းလျှပ်စစ်ပြပွဲ" - ချီတက်ပွဲ၏ 50 ကို ဂုဏ်ပြုသော ခမ်းနားသော ဖိုင်နယ်အသစ်တစ်ခုပါရှိသည်။th နှစ်ပတ်လည်နေ့ - နှင့် "Disneyland ထာဝရ" Disneyland တွင် အံ့မခန်း မီးရှူးမီးပန်းများ။ Disney California Adventure Park တွင် ညစဉ်ဖျော်ဖြေခြင်း၊ "အရောင်ကမ္ဘာ" ကြီးမားသောရေမျက်နှာပြင်ကို ဖန်တီးပေးသည့် အစွမ်းထက်သော စမ်းရေများဖြင့် အကြိုက်ဆုံး Disney နှင့် Pixar ဇာတ်လမ်းများတွင် ပရိသတ်များကို နှစ်မြှုပ်လိုက်ပါ။
မှော်ဆန်သော အစားအစာနှင့် ဖျော်ဖြေရေး အတွေ့အကြုံအတွက် ဧည့်သည်များသည် ရွေးချယ်ထားသော အံ့မခန်းကြည့်ရှုရန်အတွက် သီးသန့်ကြည့်ရှုရန်နေရာသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ပါ၀င်သည့် ထမင်းစားပက်ကေ့ဂျ်များ သို့မဟုတ် အချိုပွဲပါတီကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။* ဖျော်ဖြေမှုအချိန်ဇယားများနှင့် အစားအသောက်ပက်ကေ့ဂျ်အချက်အလက်ကို တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Disneyland.com.
Disney California Adventure သည် ယခုနှစ်တွင် အထူးမှတ်တိုင်တစ်ခု ကျင်းပနေပါသည်။ အဆိုပါ 10th 2012 ခုနှစ်တွင် ပန်းခြံ၏ အဓိက တိုးချဲ့မှု နှစ်ပတ်လည်နေ့ပထမဆုံးဧည့်သည်များသည် Buena Vista လမ်းသစ်တွင် လမ်းလျှောက်ပြီး 66 လမ်းကြောင်းရှိ Cars Land တွင် ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၊ ထိုအချိန်မှစ၍ Disney California Adventure သည် ပိုမိုပျော်စရာကောင်းပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများကို ဆက်လက်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးနစ်မြှုပ်မြေ၊ Avengers ကျောင်းပရဝုဏ်2021 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး WEB Slingers- A Spider-Man Adventure နှင့် Doctor Strange- Mysteries of the Mystic Arts အတွေ့အကြုံများကို ပါရှိသည်။
တိုက်ရိုက်ဂီတနှင့် ထမင်းစားခြင်းအပါအဝင် စိတ်အားထက်သန်စွာ အတွေ့အကြုံများကို ဂုဏ်ပြုပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Disneyland Resort တွင် Celebrate Soulfully ကို မိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ Black အမွေအနှစ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ဂုဏ်ပြုသော နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံများဖြင့် အခမ်းအနားအား ဆက်လက်ဆင်နွှဲရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
မေလ 28 ရက်နေ့တွင် "ခြင်္သေ့ဘုရင်ပုံပြင်" ပြန်လာသောအခါ၊ Disneyland ရှိ Troubadour Tavern တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ မီနူးအသစ် ကြက်-အုန်းဟင်း ကန်စွန်းဥနှင့် ဘာဘရီ-အမွှေးအကြိုင် ပေါက်ပေါက်တို့ အပါအဝင် ရှိုးမှ လှုံ့ဆော်မှုပြုသည်။ ဧည့်သည်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်ယူမှုများသည် Walt Disney Animation Studios ၏ “The Lion King” ကို ဂုဏ်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Simba ပါဝင်သည့် အမှတ်တရ ပေါက်ပေါက်ပုံး၊ ယခုနွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်လာမည်။ ရရှိနိုင်မှုသည် နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံး ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဇွန်လ 1 ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အထိ၊ Disneyland Resort သည် Black Music Month ကို အသားပေးဖော်ပြပါမည်။ နေ့စဉ် တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေရေး - doo-wop၊ Motown၊ funk၊ ရက်ဂေးနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ တေးဂီတအမျိုးအစားများကို ဂုဏ်ပြုခြင်း - အပြင် အထူးအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာDisney California Adventure၊ Downtown Disney District နှင့် Disney's Grand Californian Hotel & Spa တို့တွင်။
"The Soul of Jazz: အမေရိကန်စွန့်စားခန်း" ဂျက်ဇ်ဂီတ၏ အမွေအနှစ်နှင့် တက်ကြွသောသမိုင်းကြောင်းကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် ခရီးသွားပြပွဲကို ဇွန် ၁ ရက်မှ ဇူလိုင် ၄ ရက်အထိ Downtown Disney ခရိုင်ရှိ ဧည့်သည်များအားလုံးအတွက် အခမဲ့ပြသမည်ဖြစ်သည်။ Joe Gardner – ဂီတပညာရှင်၊ အကြံပေးနှင့် Disney နှင့် Pixar တို့၏ မူရင်းကာတွန်းရုပ်ရှင်၏ သရုပ်ဆောင် ၊ “စိုးလ်” – ဤအစီအစဥ်ကို လွှမ်းမိုးနေသော မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ဖန်တီးသူများကို ဂုဏ်ပြုသည့် ပြပွဲ။
ဧည့်သည်များသည် Avengers Campus တွင် Dora Milaje၊ တော်ဝင်ကိုယ်ရံတော် Dora Milaje နှင့် လေ့ကျင့်မှုကဲ့သို့သော အတွေ့အကြုံများဖြင့် ပွဲတော်ကို Avengers Campus တွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဧည့်ခံနိုင်ပြီး Downtown Disney ခရိုင်ရှိ Ralph Brennan's Jazz Kitchen တွင် Creole ဟင်းလျာများကို စားသုံးနိုင်ပါသည်။
Disneyland Resort တစ်လျှောက် အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသော အတွေ့အကြုံများ
ဘွဲ့နှင်းသဘင်နှင့် အားလပ်ရက်များမှ အထူးအချိန်အခါများအထိ ဧည့်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ အမှတ်တရများကို အိမ်သို့ ယူဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Disney PhotoPass ဝန်ဆောင်မှုမှ သင်၏အခိုက်အတန့်ကို ဖမ်းယူမှုအသစ်. ဇူလိုင်လ 11 ရက်နေ့ အစောပိုင်းမှ စတင်၍ Disneyland Park တွင် အကန့်အသတ်ဖြင့် အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ အခမ်းအနားများ၏ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကို ဖမ်းယူပေးသည့် Disney PhotoPass ဓာတ်ပုံဆရာနှင့် မိနစ် 20 ကြာ စိတ်ကြိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုများကို ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များပိုမိုရရှိနိုင်ပြီး ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများကို မကြာမီဖွင့်ပါမည်။ Disneyland.com။ **
ဇွန်လတွင်လည်း အဝေး၊ အဝေးမှ ဂလက်ဆီ ပရိသတ်များသည် အချိန်အကန့်အသတ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်၊ Star Wars- အပြင်အဆင်အတွေ့အကြုံများ၊ ဇာတ်ကောင်တွေ့ဆုံမှုများနှင့် အခြားအရာများ အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခွင် - တစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိနိုင်သော galactic စွန့်စားမှုများအပြင် Star Wars: Galaxy ရဲ့ Edge နှင့် Disneyland ရှိ Tomorrowland။ အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုများတွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော Hyperspace Mountain၊ Disney PhotoPass ဓာတ်ပုံဆရာများထံမှ အထူး Magic Shots များနှင့် အခြားကမ္ဘာပေါ်ရှိ စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပါဝင်သည်။
Disney California Adventure တွင် ဇွန်လအတွင်း ရွေးချယ်ထားသော ညများတွင် ဧည့်သည်များသည် "ကောင်းသောနေ့များ" ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ကျောင်းစိတ်ဓာတ်ကို ပထမဆုံးအဖြစ် ပြသနိုင်သည် Disneyland After Dark- Grad Nite ပြန်လည်ဆုံဆည်းခြင်း။. သီးခြားလက်မှတ်ရရှိထားသော အစီအစဉ်သည် အချို့သောဆွဲဆောင်မှုများ၊ ထူးခြားသော အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာများ၊ အထူးဇာတ်ကောင်အတွေ့အကြုံများ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ အပြင်အဆင်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားအရာများအတွက် စောင့်ဆိုင်းချိန်ကို တိုတောင်းစေသည်။
Downtown Disney ခရိုင်နှင့် Disneyland Resort ၏ဟိုတယ်များ
ကွဲပြားသော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားသောက်ဆိုင်များ၊ အကြိုက်ဆုံး သရေစာဆိုင်များနှင့် စျေးဝယ်ဆိုင်များ စုစည်းမှုဖြင့်၊ ဒစ္စနေးမြို့လယ် ခရိုင် ဒီနွေရာသီမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိသားစုတွေ အတူတကွ စားသောက်ဖို့ အအေးဆုံးနေရာဖြစ်လာမှာပါ။ ဧည့်သည်များသည် Splitsville Luxury Lanes တွင် ၎င်းတို့၏ဂိမ်းကို ရနိုင်သည်၊ ညစဉ် ဖျော်ဖြေရေးတွင် ကခြင်း နှင့် အခြားအရာများကို ရယူနိုင်ပါသည်။
ဤနွေရာသီတွင် ဆင်နွှဲရန်နှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် များစွာရှိသဖြင့် ဧည့်သည်များသည် ထိုနေရာတွင် တည်းခိုခြင်းဖြင့် မှော်ပညာကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။ Disneyland Resort ၏ဟိုတယ်များပန်းခြံနှစ်ခုလုံးသို့ အဆင်ပြေစွာဝင်ရောက်ခွင့် ပေးဆောင်သည့် (တရားဝင်ပန်းခြံဝင်ကြေးနှင့် ပန်းခြံကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများ)၊ Disneyland Resort ဟိုတယ်တစ်ခုသာ ပေးစွမ်းနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် မှော်ဆန်သော အထိအတွေ့များ။ ညတွင်းချင်း ဟိုတယ်ဧည့်သည်များသည် Disney's Grand Californian Hotel & Spa ဝင်ပေါက်မှ Disney's Paradise Pier Hotel သို့ မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည့် Disney's Paradise Pier Hotel မှတဆင့် Disney's California Adventure သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခံစားနိုင်သည် - Disneyland Hotel ဧည့်သည်များအတွက် အဆင်ပြေသော Monorail access မှတဆင့် Disneyland Park သို့ တိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ယခုနွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင် Disney's Grand Californian Hotel & Spa၊ Disneyland Hotel နှင့် Disney's Paradise Pier Hotel တွင် တည်းခိုသောဧည့်သည်များသည် Disney's Paradise Pier Hotel အပါအဝင် ထူးခြားစွာ Disney အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အစောပိုင်းဝင်ရောက်ခွင့် နှင့်စွမ်းရည်မှ ရွေးချယ်ထားသော ပန်းခြံမှဝယ်ယူမှုများကို ၎င်းတို့၏အပန်းဖြေဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ပါ။.
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ California | Entertainment က | ဟော်တယ် | Disneyland | spa
Impiana Hotel Senai သည် Rewards App ကိုဖွင့်သည်။ ဟော်တယ်|
Blossom Hotel Houston သည် 2022 ခုနှစ်အတွက် US ရှိ TripAdvisor ၏ အကျော်ကြားဆုံးဟိုတယ်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဟော်တယ်|
ယခု Marriott Hotels သည် Dasvidaniya ကို ရုရှားသို့ ပြောနေသည့် ယူကရိန်းနှင့် အော်ဟစ်နေပါသည်။ ဟော်တယ်|
Pride Hotels တွင် ကွပ်ကဲမှု ဒုတိယမြောက် အသစ် ဟော်တယ်|
Tourism Seychelles သည် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားဧည့်သည်များအတွက် ခရီးသွားယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသည်။ ဟော်တယ်|
California Disneyland Entertainment က ဟော်တယ် spa
ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ Ontario အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ ပရီမီယံနားနေခန်းအသစ်
ဟာဝိုင်အီတွင် ဂျပန်မှလွဲ၍ ခရီးသွားများ ပြည့်လျှံနေသည်။
ITA Airways သည် Airbus A350 ၏ ပထမဆုံး အီတလီအော်ပရေတာဖြစ်သည်။
Cayman Islands သည် Cruise Tourism ဖြင့် အရှိန်မြှင့်လာသည်။
Timeshare ပိုင်ရှင်လျှို့ဝှက်ချက်များကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
မွေးဖွားခြင်းအတွက် လိင်မဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပထမဆုံး အမေရိကန်ပြည်နယ်က တားမြစ်...
လူသားများနှင့် ဆော်လမွန်တို့သည် Qatar Airways ကို ပျံသန်းခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့သည်...
5 ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသား 2021 သန်းကျော် စခန်းချခဲ့သည်။
Saber သည် ဟိုတယ်အသစ်များဝယ်ယူခြင်းဖြင့် လက်လီရောင်းချခြင်းကို ပစ်မှတ်ထား...
Princess Cruises သည် အားလုံးပါဝင်သော ကမ်းလှမ်းမှုအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။
10 ခုနှစ်၏ ထိပ်တန်း နွေရာသီ အစားအစာ လမ်းကြောင်း ၁၀ ခု
ယခုနှစ်အတွင်း သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ကမ္ဘာ့ခေတ်မီဆုံးမြို့များ
The Blossom Hotel Houston သည် အမေများနေ့ Package ကို ပွဲဦးထွက်
Yotel သည် မိုင်ယာမီမြို့လယ်တွင် ပထမဆုံးသော ပူးတွဲဟိုတယ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
USA တွင် မိသားစုနှင့် အဆင်ပြေသော နှင်းလျှောစီး အပန်းဖြေစခန်း အများစု
Marriott International သည် ဗီယက်နမ်တွင် ဟိုတယ် ၈ လုံး ထပ်ထည့်ထားသည်။
Metal Polish ထုတ်ကုန်များ စျေးကွက် Outlook လွှမ်းမိုးမှု အသစ်...
St. Regis San Francisco သည် လက်ရာမြောက်သော ဒီဇိုင်းအသစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးနှင့်အတူ Jamaican Texas အချစ်ဇာတ်လမ်းအသစ်...
လူတိုင်းသည် ATM Dubai တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်ကြသည်။
အိုင်ယာလန်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအောက်မေ့ဖွယ် NYC ရှိမျှော်လင့်ချက်မီးပွား
အတူတူ။ ပိုကောင်းပါတယ်။ ချိတ်ဆက်ထားသည်- Star Alliance သည် 25 နှစ် ပြည့်ပြီဖြစ်သည်။
နယ်နိမိတ်ဖွင့်ရန် တောင်းဆိုခြင်း- Polar Bear နှင့် Beluga Whale...
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခရီးသည်သတင်းအချက်အလက်သည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
ဤနွေရာသီအားလပ်ရက်တွင် သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံး US မြို့များ
COVID ပြီးနောက် ခရီးသွားလာမှု ဘေးကင်းပါစေ။
နယူးယောက်မြို့ မြေအောက်ရထားတွင် လူ ၁၀ ဦး သေနတ်ထိမှန်ခဲ့သည်။
Marble Falls ၏ ဟိုတယ်စီမံကိန်းအသစ်
Copa Holdings ၏ အသားတင်အမြတ်ငွေသည် ဒေါ်လာ ၈၉.၄ သန်းမှ...
အိန္ဒိယရှိ စျေးကွက်အလယ်အလတ်ရှိသော ဟိုတယ်များ၏ အစုစုအသစ်
နေရောင်ခြည်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရှိ ဖုန်မှုန့်များကို မုန်တိုင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။